चर्चित अभिनेत्री रेखाले आखिर कसको नाम को लगाउछिन सिन्दुर ? यस्तो छ भित्रि रहस्य – ramechhapkhabar.com
चर्चित अभिनेत्री रेखाले आखिर कसको नाम को लगाउछिन सिन्दुर ? यस्तो छ भित्रि रहस्य
रेखा ७० को दशककी सुन्दर अभिनेत्री रेखाको नाम यस्ता अभागी अभिनेत्रीमा पर्छ, जो अहिलेसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । रेखा र अमिताभको प्रेमसम्बन्ध त हिन्दी सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो प्रेमकहानी हो । जब अमिताभ र रेखा एक–अर्कासँग नजिक भए, त्योभन्दा अगाडि नै अमिताभले जया भादुडीसँग विवाह गरिसकेका थिए ।
रेखाले अमिताभको नामको सिन्दूरसम्म हालेको किस्सा पनि बलिउडमा हिट छ ।करिश्मा कपुरस्९० को दशककी हिट अभिनेत्री करिश्मा कपुर अजय देवगणसँग गहिरो प्रेममा थिइन् । अजयसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् । यो जोडी फिल्म ‘जिगर’, ‘धनवान’, ‘संग्राम’, ‘सुहाग’ ‘शक्तिमान’ फिल्ममा देखिए ।
त्यही समय अजय र रविना टन्डनको प्रेमप्रसंग बाहिर आयो । अनि करिश्माको प्रेम अधुरै रह्यो । अजय र रविना टन्डन फिल्म दिलवालेबाट नजिक भएका थिए । तर, उनीहरूको प्रेम पनि सफल भएन । सोनाली बेन्द्रेस्९० को दशककी सुन्दर अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे अभिनेता सुनील सेट्टीसँग प्रेममा थिइन् ।
यी दुईको भेट १९९४ मा आएको फिल्म ‘टक्कर’ को सुटिङका क्रममा भएको थियो । पछि यो जोडीले ‘गद्दार’, ‘सपूत’, ‘भाइ’, ‘कहर’, ‘हम से बढकर कौन’ र ‘रक्षक’ जस्ता हिट फिल्म दियो । फिल्मी यात्राका क्रममा सोनाली र सुनील प्रेममा परे । दुवैको विवाहको कुरा पनि चलेको थियो । तर, सुनील पहिले नै विवाहित थिए । यही कारण सुनील पछि हटे । सोनालीको प्रेम अधुरै रह्यो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।